Fampitandremana… manome lanja fahadisoana | NewsMada
Raha tenenin-dava na atao dridran’Ingilo, hono, ny zavatra iray, tsy handaitra na tsy hisy hasiny intsony amin’ny farany. Zava-doza koa anefa raha odian-tsy hita na tsy tenenina fa miotrika any anaty na any amin’ny takona any. Mety hipoaka amin’ny tsy ampoizina na ho ela na ho haingana?
Hatramin’izao, toy ny mbola fery vao amin’ny sasany ny amin’ny foko sy ny fiaviana? Toa tsy mety hanakom-pery ny amin’izany, na tsy mety hanolatra tanteraka. Eny, na ny miteny sy miresaka azy aza, maha sakodiavatra be ihany ary mety hahazoana tondro-molotra na tsiny tsy fidiny.
Nahoana izany no resahina eto amin’izao? Amin’izao fotoam-pifidianana izao, mandeha sy miseholany ny amin’ny adim-poko. Voalaza aza fa misy mikotrika sy mandrehitra adim-poko… Tsy inona fa vokatry ny fikirakirana voka-pifidianana, na fanaovana tombantombana amin’itsy sy iroa.
“Mampitandrina dieny izao ireo alaim-panahy hikotrika sy handrehitra adim-poko eto amin’ny firenena”, hoy ny filohan’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC) izay tamin’ny famoahana ny voka-pifidianana ofisialy farany teo. Tonga hatrany na amin’izany ny raharaha?
Tena mavesa-danja eo amin’ny vahoaka ifotony ve izay foko niaviany, raha ny hanina hiditra ao am-bavany isan’andro aza, ohatra, manahirana azy. Izay ao anaty fahasahiranana lalina sy maharitra, hanome lanja na hahatsiaro izay foko niaviana ve fa tsy ny maha olombelona no zava-dehibe?
Tsy mieritreritra izay foko sy adim-poko ny vahoaka amin’izao… Ny fampitandremana no manetsika ny fahatsiarovany izany? Amin’izany, saika ny avara-pianarana ihany no manetsika ny amin’ny foko sy adim-poko. Atao fitaovana arakaraka izay tombontsoa manokana iadiana sy arovana?
Tsy mahafa-bela ny amin’ny foko sy fiaviana? Eny, anahiana ady aza indraindray… Nahoana no isaky ny fotoan-tsarotra sy saropady eto amin’ny firenena hatrany izany vao hetsehina sy fohazina toy ny fota-mandry? Amin’izany, na ny fampitandremana aza, lasa manome lanja izany ho azy…